We.com.mm - မသေခင် ဒိတ်လုပ်သွားသင့်တဲ့ ကချင်ဆယ်လီဘရစ်တီ ( ၁၀ ) ဦး
မသေခင် ဒိတ်လုပ်သွားသင့်တဲ့ ကချင်ဆယ်လီဘရစ်တီ ( ၁၀ ) ဦး
အဖိုးတန်လွန်းတဲ့အသက်ရှင်ချိန်တွေမှာ လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲ ဟောဒီလို Cele အလန်းတွေထဲက တစ်ယောက်လောက်နဲ့ Dating မလုပ်ပဲနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ….
မင်းရဲ့ အသက်ရှင်ဖြစ်တည်မှု ဆိုတာဘာအတွက်များလဲကွယ် ….
( ၁ ) အောန်ဆိုင်း
ယောကျာ်းလေးအများစု Dating လုပ်ချင်တဲ့ စာရင်းမှာထိပ်ဆုံးကပဲ။ အားကစားလိုက်စားလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ Body Curve တွေဟာ ပုရိသတွေအသက်ရှုမှားချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆွဲဆောင်ညှို့ယူနိုင်လွန်းတယ်။
( ၂ ) လုလုအောင်
ခေးကြီး၊ လု၊ ခေးလု ဆိုပြီး ယောကျာ်းလေးတွေပါးစပ်ဖျားမှာနာမည်ကြီးလွန်းတဲ့ လု ဆိုသည်မှာလည်း မသေခင် DATE လုပ်သွားဖို့သင့်တဲ့ စာရင်းမှာအပါအဝင်ပါပဲ။ single mom ဖြစ်ပေမယ့်လည်း မပျက်စီးသေးတဲ့ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်အသွယ်သွယ်ကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ လု မှ လု ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မိ။
( ၃ ) နော်ဒူးဒူ
တက်သစ်စ Model .. လီဆူးလူမျိုးကျောင်းဆရာမလေး နော်ဒူးဒူ ဟာလည်း ဒီစာရင်းကနေဖယ်ထားလို့မရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ၅ ပေ ၁၁ လက်မဆိုတဲ့ အရပ်အမောင်း၊ တင်းရင်းလှပတဲ့အသားအရေ၊ လှပတဲ့ကောက်ကြောင်း၊ ဆရာမတည်းဟူသော အနန္တနောအနန္တဂုဏ် နဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပွင့်လင်းတဲ့သူမရဲ့အရည်အချင်းတွေကြောင့်စွဲမက်စရာကောင်းနေပြန်ရော။
( ၄ ) ဆိုင်းလု
ဆိုင်းလူ လှချက်ကတစ်မျိုး။ ကိုရီးယန်းဆန်ဆန် sexy ကျကျအလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူ M ဆိုင်းလူ ကိုလည်း dating လုပ်သင့်တဲ့စာရင်းထဲထည့်လိုက်တယ်။ Sexy ကျလွန်းတဲ့အပြင် တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့မတူတဲ့ fresh and active ဆိုတဲ့ sense ကိုလည်း M ဆိုင်းလူ ဆီမှာတွေ့နိုင်တယ်။
( ၅ ) J နော်
Euro beauty ဒါမှမဟုတ် Exotic Beauty လို့ခေါ်တဲ့ မဟာဆန်ဆန်အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေထဲ Maria J Naw လည်းအပါအဝင်ပါပဲ။ Fashion ကျလွန်းပြီး လှပတဲ့သူမကို မြန်မာပြည်ရဲ့ အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ လို့တောင်တစ်ချို့ကတင်စားကြတယ်။
( ၆ ) အမွန်း
မြန်မာနိုင်ငံတင်မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံခြားမှာပါ fan တွေအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူ .. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းပြီး sexy ကျတဲ့ Ah Moon ဟာလည်း ပုရိသတွေ dating လုပ်ချင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါပဲ။
( ၇ ) Ja Dim Kai
2nd Miss Universe Myitkyina Winner ဖြစ်တဲ့ အားကိုင် ( ဂျာဒင်မ်ကိုင် ) ဆိုရင်လည်း ပြေပြစ်လှပတဲ့မေးရိုး၊ တောက်ပတဲ့မျက်ဝန်းတွေ နဲ့ sexy lips လို့ခေါ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေဟာ သူမရဲ့ အဓိက Main attraction point တွေဖြစ်တယ်။
( ၈ ) Ja Seng Ing
ဂစ်တာရှိတ် လို့ခေါ်တဲ့ ဘော်ဒီ နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ Ja Seng Ing ဟာလည်း ယောကျာ်းသားတွေ dating လုပ်ချင်တဲ့စာရင်းထဲမှာ အပါအဝင်ပါပဲ။ သူမရဲ့အပြုံးချိုချိုနဲ့အသက်ပါတဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရာတွေပါ။
( ၉ ) အိန်ဂျယ်လမုန်
Elegant & Sexy ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်သလို sweet ဖြစ်တဲ့အပြုံးတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အဲဒီအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နတ်သမီးလေးတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ Angel Lamung ကအကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
( ၁၀ ) Wai Yi Hnin Sett
ကိတ်ေ၀ ဆိုပြီးယောကျာ်းလေးတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့သူမဟာ ပုရိသတွေကိုအဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး မိန်းကလေးတွေစာရင်းမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Sexy ကျလွန်းတဲ့ body ကြောင့်လည်း အသက်ရှုမှားဖွယ်ရာပါပဲ။